Abner Figuereo သည် VP Business Development အဖြစ် LYNX Technik Inc ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Abner Figuereo သည် VP Business Development အဖြစ် LYNX Technik Inc ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်
Abner Figuereo, LYNX Technik Inc အတွက် VP စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အချက်အလတ်ဖြင့်အနိုင်ရသောဆုပေးပွဲများပြုလုပ်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူ LYNX Technik AG ၏အမေရိကန်စစ်ဆင်ရေး LYNX Technik Inc. နှင့် ProAV မှ Abner Figuereo သည်အဖွဲ့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒုဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Abner သည်ဝင်ငွေများမောင်းနှင်ခြင်း၊ ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အမေရိကဒေသတွင်းရှိမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်သာမကကုန်သည်ကွန်ယက်နှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
LYNX Technik Inc မှဥက္ကPresident္ဌ Steve Russell က LYNX Technik Inc. သည်တိုးတက်မှု၏ကြီးမားသောအနေအထားကိုတွေ့မြင်ရပြီး Abner ကိုကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အဆင့်သို့တိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကူညီသည်။ Abner သည် Broadcast နှင့် AV စျေးကွက်များတွင်တိုးချဲ့ရန်နှင့်အမေရိကရှိစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းသစ်များကိုရယူရန်အတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ”
အာဗနာသည်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအခန်းကဏ္ in များ၌လုပ်ကိုင်လျက် Abner သည်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုအသစ်များ၊ အထောက်အပံ့ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့များကို ဦး ဆောင်ခြင်း၊ LYNX Technik Inc သို့မ ၀ င်ခင် Abner သည် Pace အပါအ ၀ င်အကြီးစားလေးလံသောလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ARRISဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး) နှင့် Grass Valley တို့ဖြစ်သည်။
Abner က“ LYNX Technik Inc ကိုငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေယူလာရတာအရမ်းပျော်တယ်။ “ ကုမ္ပဏီတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဖောက်သည်အထောက်အပံ့များအရအထင်ကြီးစရာကောင်းသောမှတ်တမ်းရှိပြီးကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ”
Abner သည်နယူးဂျာစီပြည်နယ် Rutgers တက္ကသိုလ်မှလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ အာဗနာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
LYNX Technik Inc အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.lynx-usa.com or www.lynx-technik.com.
Abner Figuereo သည် VP Business Development အဖြစ် LYNX Technik Inc ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည် - နိုဝင်ဘာလ 19, 2019
မီဒီယာ Links များ NAB နယူးယောက်၏ Big အဆင့်ပေါ် 100G IP ကိုဖြေရှင်းနည်းကိုအားပေးအားမြှောက် - အောက်တိုဘာလ 8, 2019
IBC 2019 မှာ Lynx Technik ပွဲဦးထွက်မယ့် HDR Evie + - စက်တင်ဘာလ 9, 2019
Abner Figuereo ARRIS ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မြက်ချိုင့် greenMachine Lynx Technik အရှိန်အဟုန် စတိဗ်ရပ်စယ်လ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် yellobrik	2019-11-19
ယခင်: EditShare သည် Uber မှစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးစီးနင်းရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်တွင် 4K ရှိကြီးမားသောအတားအဆီးသန္တာကျောက်တန်းကိုပရိသတ်များတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန်ကူညီခြင်း။
နောက်တစ်ခု: Teletcino နှင့် IB3 အတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွင်သစ် Dalet Cube NG ပါဝါ